Waa Guri Deegaan ah, kana kooban 3 Qol, Musqul iyo Jiko. Kuna yaala agagaarka #Isgoyska_SOS dhanka Degmada Yaaqshiid. Waa Guri leh Documents saxan.
Cabirkiisuna yahay 15x20m2.
Qiimahana waa $26,000 israac ah.
Faah faahinta, Kala soo xiriir shirkada
Tel: 0612 922 244 / 0612 922 242
Info@Kirosom.com / www.kirosom.com
Updated on August 13, 2018 at 7:10 am